Umbuzo Ama-autospoilers A320
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1207 by i-irbaz444
Ngilande i-A320 Family Pack futhi ngiyifake. Izindiza ziyamangalisa. Ngangiyithanda imfanelo yokwakheka futhi ngiyayithokozela i-cockpit enhle ebusika ebusuku. Inkinga kuphela ukuthi ngifuna ukukhubaza umsebenzi we-autospoiler ne-autoflaps. Lokho engikushoyo lapho ngiphatha khona abaphangi bahlomile ngokuzenzekelayo kodwa bavaliwe masinyane lapho nginama-60knots abonakala engacabangi. Ngisho ngenkathi kukhishwa ama-flaps abuyiselwa ngaphakathi kwezingxenyekazi ze-5-10 ngemuva kokuthatha. I dont dont want this function. Ingabe kukhona indlela yokukhubaza?
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1222 by Isi-Matzoun